» मकवानपुरमा आजबाट थपीएको निषेधाज्ञाः के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइदैन ?
मकवानपुरमा आजबाट थपीएको निषेधाज्ञाः के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइदैन ?
१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १०:२०
हेटौंडा – कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै मकवानपुरमा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्दै एक साता लम्ब्याइएको छ । यही जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो ।
यसअघि जेठ १३ गते राति १२ जेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको मङ्गलबारको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न आगामी जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए ।
उक्त अवधिमा सबै प्रकारका भीडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैन । सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । बिहान–बेलुकाको घुमघाम (मर्निङ र इभिनिङ वाक)मा समेत रोक लगाइएको छ ।
अत्यावश्‍यक खाद्य सामग्री, मान्छा, मासु, अण्डा, तरकारी तथा फलफूल बिक्रीबितरण गर्ने पसल विहान ५ बजे देखी विहान ८ बजेसम्म खेल्न पाईनेछ । औषधि पसल, पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपो र अक्सिजन डिलिन्डर निमित संचालन गर्न पाईनेछ ।
हेटौंडा मुख्य बजार क्षेत्र उत्तरमा चौकीटोल, दक्षिणमा कर्राखोला, पूर्वमा क्याम्पाडाँडा र पश्चिममा थानाभर्याङ भित्रमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्यान्य तथा तरकारी पसल पनि पुर्णरुपले बन्द जारी रहने छ । दुध तथा तरकारी बिक्रेताहरुले सम्बन्धित सहकारी संस्थामार्फत अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरी तरकारी तथा दुधलाई मोवाईल भ्यानको प्रयोगबाट टोलटोलमा बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ ।
जिल्लाभरका वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, मनी ट्रान्सफर तथा सहकारीहरू संचालन गनै पाइने छैन भने थाहा नगरपालिकामा जेठ ११ गतेदेखि जेठ १५ गतेसम्म औषधी पसल बाहेक अन्य सम्पूर्ण पसल तथा व्यवसायहरू पूर्ण रुपमा बन्द जारी आदेशमा भनिएको छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको हकमा उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कार्मचारीहरुलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गराई उद्योग परिसर वा निश्चित स्थानमा बाहिर आवातजावत नहुने गरी संचालन गर्न पाईनेछ । त्यस्तै बिकास निर्माणको कार्य गर्दा कार्यररत कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई आयोजना तथा निमार्णस्थलमै रहने गरि ब्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
स्थानिय प्रशासनद्वारा जारी गरिएको आदेशको अबज्ञा गरेको खण्डमा कोभिड–१९ संकट ब्यवस्थापन आदेश,२०७८ को दफा २१ र २२ बमोजिम कार्वाही गरिने प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिए । आदेशको उलङ्घन गर्ने ब्यक्तिलाई एक लाख तथा संस्थालाई पाँच लाख जरिवान गरिने छ । त्यस्तै मास्क नलगाई हिड्नेलाई पटकै पिच्छे एक सय जरिवान, दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार तथा अन्य सवारीलाई पाँच हजार जरिवान गरिने प्रजिअ पाण्डेले बताए । प्रहरखवरबाट ।
यस्तो छ मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणी पाण्डेद्वारा जारी आदेश